abesifazane abaningi bakholelwa ukuthi nobunzima kukhethwa izingubo, izicathulo nezinye izinsimbi zisebenza kuphela izingubo labesifazane, futhi uqiniseka ukuthi abamele nengxenye enamandla lesintu nalo lonke okuningi kulula - suit, uthayi ihembe, izicathulo. Kodwa kuphela ungacabanga labo basuke bengazi welithi "fashion madoda". Kulokhu, uma siqhathanisa inombolo yezinto izicathulo zabesifazane kanye zabesilisa, amantombazane ngeke lifakwe labo onobuhle eziye lathathwa ikhabethe zabantu abasha, kungase kwenzeke ukuthi abafana badiliza ku abaholi mncintiswano imfashini.
Oxfords ngoba amadoda: isitayela namanenekazi IsiZulu
Igama ezihlukahlukene izicathulo zabesilisa ezingqondweni ngokushesha kudala isithombe umnumzana IsiZulu kweqiniso, qaphela ngokulinganayo samanje kanye nomlando imfashini, futhi umbono jikelele kwalo mniningwane ukuphelela UK. Konke lokhu kufanele athwale ukubukwa ezizungezile kwanoma iyiphi Dandy self-ukuhlonipha, ngaphandle Albion.
Oxfords izicathulo ngoba amadoda - kungcono izicathulo ne lacing ezifihliwe, ngamanye amazwi, ngaphansi Vamp ithungwe iqakala amabhuzu, okuyinto ivalwe phezu ulimi.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi imodeli wangempela isihlangu kumele yakhelwe perforation, nakuba kufanele wabonisa ukuthi lokhu akunjalo.
Oxfords zabesilisa: umlando
Ngu kakhulu igama izicathulo zayo ungakwazi kakade ukuqagela ukuthi umlando wabo ixhunyiwe lokuqala zonke ne isiZulu enyuvesi, okuyinto focus of elite ahlukile nesayensi Enkulu YaseBrithani. Fashion mlando baphikisa ngokuthi abafundi bendawo ekhulwini XVIII bahamba ezicathulweni, njengabo oxfords izicathulo ngoba amadoda. Kusukela sizogqokani abantu zabo ezincane abanandaba. Ukuthi nje umfundi ngamunye unohlobo ekhethekile. Lolu hlobo izicathulo okuningi okufana esase sikhona kakade ngesikhathi amabhuzu anolaka ezidume ngakho phakathi izakhamuzi Ireland neScotland. Babizwa ngokuthi bangabantu "Balmoral" sibonga enqabeni edume. Kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi lokhu e-United States futhi lezi izicathulo abizwa ngokuthi, nakuba eYurophu bebizwa Oxford.
Oxfords ngoba amadoda: yini okufanele uyigqoke?
Oxford - kungcono omunye imisebenzi ebaluleke kakhulu efanelekayo izicathulo amadoda wendzabuko. umbala omnyama Model kubalulekile uma uya ukuvakashela izenzakalo zezwe enkulu ingubo imithetho eqinile. Gqoka nabo Tuxedo, suit, kanye ikhadi lebhizinisi.
Kodwa akufanele iwela stupor nisebancane - Abenzi izicathulo zabesilisa isikhathi eside kakade waqhamuka ucwaningo, ukukhiqiza akuyona nje imodeli self-ezinemibala lesikhumba smooth, okuyizinto kakhulu esiqinile isithombe olusemthethweni. Okwamanje, ungakwazi ukuthenga izicathulo uyobheka ngokuphelele futhi izingubo yeningi. Namuhla Eclecticism fashion, Ngakho-ke, lapho yithuba elihle ukusizakala ke.
Oxfords ngoba amadoda: lapho ukuthenga?
Uma kwenzeka uhlela likwazi ukuncintisana namanye namanenekazi aseBrithani ocacile esingenakuqhathaniswa isitayela wesilisa, hamba Into yokuqala kule Boutique emangalisayo stylish Oxford. Futhi kungenzeka ukuba usebenzise noma yimaphi izipesheli ezitolo inthanethi izicathulo ezahlukene stylish.
Okuqukethwe calcium ukudla